ट्राफिक प्रहरीसंग आफ्नो बुबा पारसको ल.फडा परेपछि छोरी कृतिकाले मुख खोलिन…. – SUDUR MEDIA
ट्राफिक प्रहरीसंग आफ्नो बुबा पारसको ल.फडा परेपछि छोरी कृतिकाले मुख खोलिन….
August 1, 2021 August 2, 2021 AdminLeaveaComment on ट्राफिक प्रहरीसंग आफ्नो बुबा पारसको ल.फडा परेपछि छोरी कृतिकाले मुख खोलिन….
काठमाडौं, १७ श्रावन । बेला बेला बि.बादमा आइरहने पुर्व युवराज पारस शाह गत शुक्रबा बेलुकाको घ.टना पछी फेरी वि.वाद र चर्चामा आएका छन । धेरै अगाडी थाइल्याण्डमा भएको ल.फडा देखि युट्युबर सोनीकासंगको सम्बन्धको चर्चाले पारसको नाम मिडियामा आइरहेको थियो । तर गत शुक्रबार भने काठमाडौँको महाराजगंजस्थित ट्राफिक प्रहरीसंग भएको घ.म्साघ.म्सीले चर्चा पाएको छ । साझपख पुर्वयुवराज पारस आफ्नो हारली डेभिडसनमा हुइकीरहेका हुन्छन । त्यतिकै ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीको आखा उनि तिर पर्छ । कारण पारसले बिना हेल्मेट बाइक हाकीरहेका हुन्छन । त्यसमाथि अत्याधिक ध्वनि प्रदुषण गर्ने हारली डेभिडसन् । प्रहरीले नरोक्ने कुरै भएन ।
ट्राफिकले रोकेर सोधपुछ र सम्झाउने काम गर्दै जादा स्थिति असामान्य हुन्छ । त्यहि बीच त्यहाँ उपस्थित केहि बटुवाले भिडियो रेकर्ड गर्छन । सार्बजनिक भिडियोमा ट्राफिक प्रहरीले हातमा पक्रेर अन्त कतै लान खोजी रहेको देखिन्छ भने पारस चाहि ‘जान्न जान्न जान्न..’ भनिरहेको सुनिन्छ । तर अन्तत ट्राफिक प्रहरीले पारसलाई छोड्छन । उनलाई छोडे लगत्तै पारसका सहयोगी र समर्थकले पुन: बाइक सम्म पुर्याउछन । त्यस बखत केहिले पारसको जयजयकार गरेको पनि सुनिन्छ ।
यहि विषयलाई लिएर पुर्व युवराज पारसकी छोरी कृतिका शाहले पनि प्रतिक्रिया दिएकी छन । उनले ट्वीट गर्दै भनेकी छन – ‘हेलमेट छुटेको बिषयलाई प्रहरीले मर्यादापूर्वक व्यवहार गरि आफ्नो ड्युटी पूरा गर्नु पर्नेमा अ.पमानजनक ब्यबहार गरेको छ।’ यस विषयलाई लिएर पारस समर्थकहरुले भोली पल्टै उक्त स्थानमा टायर बालेर बि.रोध समेत गरेका थिए । पारसको छोरी कृतिकाको ट्वीट तल हेर्नुहोस:
मेलम्चीका बाढी पी’डित फेरि विस्थापित, भन्छन् पालमा जीवन गुजार्न गाह्रो भयो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
आजको राशिफल हेर्नुहोस्ः मिति २०७८ साल साउन १८ गते सोमबार तदनानुसार सन् २०२१ अगष्ट २ तारिख…..
केपी ओली पुगे बालकोट नि’वास, बरण्डाबाट हेरे उपस्थित जनसमुदाय ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)